Fa maninona no Jamaika? Valin-kafatra ho an'ny US "Aza mandeha" Advisory
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Fa maninona no Jamaika? Valin-kafatra ho an'ny torohevitra "Aza mandeha" US
Airlines • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • People • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Fa maninona no Jamaika? Valin-kafatra ho an'ny torohevitra "Aza mandeha" US
Miankina betsaka amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ny toekarena ao Jamaika. Ny fampitandremana amerikana ny fampitandremana momba ny dia an-tongotra faha-4 dia fahadisoam-panantenana lehibe sy fandrahonana ho an'ny firenena nosy. Betsaka amin'izy ireo no miasa ary miankina amin'ny fahasalaman'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, ary ny amerikana no ankamaroan'ny mpitsidika azy ireo.
Ny departemantam-panjakana amerikana miaraka amin'ny CDC dia namoaka Torohevitra momba ny dia 4 ho an'i Jamaika.
Ny mpanolotsaina ambaratonga 4 no mpanolo-tsaina ambony indrindra amin'ny rojo sy fitaovana ho an'ny Amerikanina "Aza mandeha."
Namaly izany fampitandremana izany ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika tamin'ny fanambarana navoakany eTurboNews amin'izao fotoana izao.
Ny minisitry ny fizahan-tany ho an'ny Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia namoaka ity fanambarana ity momba ny famoahana ny Advisory “Do not Travel” hiadiana amin'i Jamaika i Etazonia:
Vao haingana i Jamaika no nandray ny mpitsidika an-tapitrisany izay nanomboka nisokatra tamin'ny volana Jona 2020, ary afaka matoky ny mpitsidika amin'ny fahafantarana fa ny Resilient Corridors ao Jamaika - izay mandrakotra ny 85 isan-jaton'ny vokatra fizahan-tany ao amin'ny nosy ary misy latsaky ny iray isanjaton'ny mponina ato amintsika - nandrakitra tahan'ny aretina COVID-19 latsaky ny iray isan-jato tamin'ny taona lasa.
Izany dia tratra tamin'ny alàlan'ny paikady mavitrika novolavolaina miaraka amin'ireo manampahefana manerana ny sehatry ny fizahantany sy fizahan-tany. Ireo kaonty ireo dia iray amin'ireo voalohany nahazo ny faneken'ny Safe Travels an'ny World Travel & Tourism Council izay namela anay hisokatra soa aman-tsara indray amin'ny Jona 2020.
Ny fahasalamana sy ny fiarovana ny Jamaikana tsirairay ary ny mpitsidika rehetra ao amin'ny firenena no mijanona ho laharam-pahamehana indrindra aminay, ary antenainay fa ny fanondroana haavo 4 avy amin'ny Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dia fohy ihany.
Raha i Jamaika dia iray amin'ireo firenena 77 manerantany, ao anatin'izany ny maro amin'ireo rahalahintsika Karaiba, nahazo ny fanondroana ny haavo 4, dia matoky izahay fa ny Lalànan'ny Lalàm-panoherana sy ny protokolotsika dia hanohy hitondra antsika amin'ny lalana marina.
Etazonia dia namoaka fampitandremana momba ny dia 4 ho an'ny firenena Karaiba miankina amin'ny fizahan-tany.
Rehefa namoaka ny Do not Travel Advisory, ny governemanta amerikana androany dia namela ny ampahany amin'ny hoe azo antoka kokoa ny fitsidihana an'i Jamaika raha oharina amin'i Florida na Hawaii - raha ny amin'ny fandrahonana ny aretina COVID.
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, tsy vitan'ny mpitondra teo an-toerana ho an'ny fireneny fa niaraka tamin'ny fananganana ny Ivotoerana momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany momba ny fizahan-tany manerantany, I Jamaika dia nitazona lohalaharana manerantany momba ny fizahan-tany azo antoka sy ny krizy.
The Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) dia namoaka a Haavo 4 Fahasalamana momba ny dia Fanamarihana noho ny COVID-19, manondro haavon'ny COVID-19 avo lenta ao amin'ny firenena. Ny mety ho tratran'ny COVID-19 sy ny fitrangan'ny soritr'aretina mahery vaika dia mety ho ambany kokoa raha vaksinina feno amin'ny Vaksinin'ny FDA nahazo alalana. Alohan'ny handrafetana ny dia iraisam-pirenena, dia avereno jerena ireo tolo-kevitry ny CDC manokana momba vita vaksiny ary tsy voadio mpandeha. Tsidiho ny Masoivoho Pejy COVID-19 raha mila fanazavana fanampiny momba ny COVID-19 any Jamaika.
Aza mandeha any:
Ireo faritra voalaza etsy ambany ao amin'ny Kingston noho heloka bevava.
Ireo faritra voalaza etsy ambany ao amin'ny Montego Bay noho heloka bevava.
Tanàna Espaniola noho ny heloka bevava.
Famintinana firenena: Ny heloka bevava mahery setra, toy ny fanafihana an-trano, fandrobana mitam-piadiana, herisetra ara-nofo ary famonoana olona dia mahazatra. Ny herisetra ara-nofo dia matetika mitranga, ao anatin'izany ireo trano fandraisam-bahiny misy idiran'ny rehetra. Tsy manana loharanom-pahalalana ny polisy eo an-toerana mba hamaliana amin'ny fomba mahomby ny trangana asan-jiolahy mahery vaika. Tsy mitovy ny serivisy vonjy taitra manerana ny nosy, ary ny fotoana famaliana dia mety tsy hitovy amin'ny fenitra amerikanina. Ny mpiasan'ny governemanta amerikana dia voarara tsy mandeha amin'ny faritra voalaza etsy ambany, tsy mampiasa bus bus, ary tsy mitondra fiara any ivelan'ny faritra voatondro ao Kingston amin'ny alina.
Namoaka fampitandremana toy izany koa i Etazonia amin'ireo mpifanila vodirindrina Karaiba hafa, anisan'izany ny Bahamas.